Ụdị Anya - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Anya egbu egbu maka ubu na-enye anya n 'ụmụ agbọghọ
Ụmụ agbọghọ, na-eyi uwe na-adịghị akacha aka ga-aga maka egbu egbu n'ubu ha iji wepụta ihe ha na-ebu n'agha gaa n'ihu ọha
2. Achịcha anya na mkpịsị ink nke ink na-eme ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ ndị nwere akpụkpọ anụ na-acha aja aja ga-ahụ tattoo egbu egbu na-eji ejiji onk na-acha oji. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha
3. Etu egbu egbu na ejiji onk na-acha anwụrụ ọkụ na-eme ka ọdịdị ha dị mma
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ egbu egbu na ejiji ink na-eme ka ha dị mma ma na-egbuke egbuke
4. Ogbugbu anya n'elu ala na-eme ka umuaka maa mma
Ụmụ agbọghọ na-acha aja aja na-ahụ n'anya egbu egbu na-eme ka ha maa mma
5. Anya egbu egbu n'olu eme ka anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka mma egbu egbu na azụ azụ. Ejiji egbu egbu a mara mma.
6. Akara egbu egbu na-eji oji na ink pink mee ka ha mara mma.
Brown ụmụ agbọghọ na-ahụ anya egbu egbu na-acha odo odo na ink ime mmụọ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
7. Akara egbu egbu maka ndi nwanyi nwere ink ime mma; eme ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ egbu egbu na ejiji ime mma. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dịkwuo mma
8. Egbu egbu egbu na-eji ejiji ink pink eme ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown hụrụ Anya n'anya egbu egbu na obi na -emepụta ink pink. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
9. Akara egbu egbu maka ndi nwanyi nwere ink ime mma; eme ka ha mara mma
10. Akara egbu egbu na-eji oji na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka ha mara mma.
Brown ụmụ agbọghọ na-ahụ n'anya egbu egbu na-acha odo odo na-acha anụnụ anụnụ imewe na azụ n'olu. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
11. Anya egbu egbu na azụ eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ egbu egbu na azụ azụ ha; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
12. Anya egbu egbu n'akụkụ na ink na-acha anụnụ anụnụ na ime ihe nkiri pink mere ka ụmụ agbọghọ mara mma
Eji egbugbere ọnụ na egbu egbu na-egbuke egbuke na-acha akwụkwọ ndụ ojii na nkedo pink na-eme ka ụmụ agbọghọ mara mma ma mara mma
zodiac akara akaraaka akaima ima mmaegbu egbu okpuọdụm ọdụmazụ azụụmụnne mgbumma tattoosna-adọ aka mmaọnwa tattoosegbu egbu hennaegbu egburip tattoosNtuba ntughariudara okooko osisienyí egbu egbuakwara obiAnkle TattoosỤdị ekpomkpaokpueze okpuezeagbụrụ ebomehndi imeweakara ntụpọegbu egbu ebighi ebiụkwụ akaegbu egbu osisi lotusarịlịka arịlịkaegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu mmirina-egbu egbuaka mma akaEgwu ugodi na nwunyeegbu egbu diamondn'olu oluaka akandị mmụọ oziechiche egbugbuegbu egbu egbuGeometric Tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokeegbugbu egbugbuegwu egwuUche obinnụnụakpị akpịndị na-egbuke egbukengwusi pusienyi kacha mma enyikoi ika tattoo